Home » भक्तपुर नगरपालिका संक्षिप्त परिचय
भक्तपुर नगर राजनैतिक रुपमा १७ वडा र २४ वटा टोलहरुमा विभाजित छ । भौगोलिक रुपमा यो नगर उडिरहेको परेवाको आकारमा पूर्व पश्चिम ४.५ कि.मी. लम्बाई र उत्तर दक्षिण १.५ कि.मी. चौडाइमा फैलिएको छ । यस नगरको उत्तर र दक्षिणमा दुई वटा नदी र नगरभरी पोखरीहरु छरिएका छन् ।
यस शहरको आर्थिक वृद्धि विस्तारै बढ्दै छ । यहाँका मानिसहरुको मुख्य पेशा कृषि हो भने पर्यटन तीब्र रुपमा विकास हुँदै गरेको उद्योग हो । घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार व्यवसाय र हस्तकलाका सामग्रीहरु यहाँको आम्दानीको मूख्य स्रोत हुन् । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यस नगरको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६२०८५००००००० र प्रति व्यक्ति आम्दानी ७४२ डलर रहेको छ ।
यस शहरको आर्थिक विकासमा पर्यटन उद्योगले ठूलो योगदान गरिरहेको छ । अक्टोबर र नोभेम्बर महिना भक्तपुरमा पर्यटन आगमनको मुख्य सिजन हो । आ.व. २०७०।७१ मा २ लाख ९० हजार पर्यटकले भक्तपुर भ्रमण गरेका थिए ।
भक्तपुर शहरमा केही हेक्तर जमीनमात्र कृषि उत्पादनको लागि प्रयोग हुन्छ । यहाँको मुख्यउत्पादनधान, गहुँ, मकै, हरियो सागसब्जी र गेडागुडीहरु हुन् । कुखुरा पालन व्यवसायमा यो शहर आत्मनिर्भर छ ।
भक्तपुर शहरमा एउटा साना औद्योगिक क्षेत्र छ जहाँ कपडा, डेरी, काष्ठकला, रंग, सेरामिक्स, बुनाई, नेपाली कागज र धातुका सामग्रीहरुको उद्योगहरु सञ्चालित छन् । यस शहरको पर्यटन उद्योगको विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानीय सीपमा आधारित हस्तकला औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्नु पर्ने देखिन्छ । धान, चिउरा, काष्ठकला उद्योग र फर्निचर उद्योग, सिलाई र बुनाई, पौभा र थाङ्का लेखन, गलैंचा, धातुको सामग्री, माटोको भाँडाकुँडा आदि यस शहरका अन्य औद्योगिक उत्पादनहरु हुन् ।
यस शहरका हस्तकला उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरका लागि प्रख्यात छन् । काष्ठकला, थाङ्का र पौभाचित्र, नेपालीकागजका सामग्री, पुतली, ऊनको सामग्री, धातुकला, गहना, प्रस्तरकला, मितृकाकलाआदीयहाँका प्रमुख हस्तकलाका उत्पादनहरु हुन् ।
यस शहरमा १३ वटा प्राथमिक विद्यालय, १३ वटा निम्न माध्यामिक विद्यालय, ६० वटा माध्यामिक विद्यालय, १० वटाउच्च माध्यामिकविद्यालय, ७ वटा कलेज र दुई वटा प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरु रहेका छन् । यी संस्थाहरुमा विभिन्न संकायहरुमा हजारौं विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । भक्तपुर नगरपालिका आफैंले ५ वटा कलेजहरु र एउटा बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान सञ्चालन गरिरहेको छ । यी शैक्षिक संस्थाहरुमा नेपालका ६५ जिल्लाहरुबाट ५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीहरु विभिन्न संकाय र विषयहरुमा न्युन शुल्कमा अध्ययनरत छन् ।
हाल यस शहरमा ४ वटा अस्पतालहरु र ३ वटा जनस्वास्थ्य केन्द्रहरु रहेका छन् । यीमध्ये एउटा बालबालिका र महिला रोग सम्बन्धित छ, एउटा अर्बुद्ध रोग संग सम्बन्धित र बा“की २ सामान्य रोगहरुको उपचार संग सम्बन्धित छन् । नगरपालिकाले नगरका विभिन्न ठाउँमा जनस्वास्थ्य केन्द्रहरु पनि सञ्चालन गरि रहेको छ । हाल आकस्मिक सेवा प्रदानगर्दै नगरपालिकाले अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
"जीवित सम्पदा" र जीवित संग्रहालयको रुपमा रहेको भक्तपुरले नेवारी संस्कृतिको विविध आयामहरुलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । नेवारहरुको महान चा“डपर्वहरु, मौलिक जीवनशैली, संस्कार, दाफाभजन, गुठी, परम्परागत बाजागाजा र नृत्य समूहले यहाँको अमूर्त कलालाई जीवन प्रदान गरिरहेको छ ।
“जुजु धौ”, भादगाउँले टोपी तथा हाकु पटासी
१२ औं शताब्दीमा राजा आनन्द मल्लबाट स्थापित
पूर्व — नगरकोट नगरपालिका
उत्तर — चांगुनारायण नगरपालिका
दक्षिण — सुर्य विनायक नगरपालिका
अक्षांश — २७० ३९’ ५६” – २७० ४१’ ५” ल्
देशान्तर — ८५० २४’ ३९” – ८५० २६’ ५५” भ्
उचाई समुद्रको सतहबाट करिव १,३५० मिटर
वडा संख्या— १७
तापक्रम : अधिकत्तमः ३२, न्यूनतमः २
जनसंख्या विवरण – २०६८